Alahady 26 Aprily 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady nisokafan'ny Fiangonana voalohany ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana.
« Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany; ary fantatsika fa marina ny fanambarany » (Jaona 21:24)
Izao alahady izao no nivondronan’ny mpianakavin’ny finoana am-bavaka indray eto anivon’ny trano Fiangonana, ao anatin’ny vanim-potoan’ny fahamehana ara-pahasalamana, ka nisokafan’ny Fiangonana voalohany nanaovana fanompoam-pivavahana manaja ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana.
Ny Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriantsilavo Nofy no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. Rtoa Raharijaona Bodoharisoa kosa no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra masina.
Mbola mibanjina ny lohahevitra hoe » « Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » isika ary ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.
Salamo 118 : 24-29 no niaraha-namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra « Ity no andro nataon’i Jehovah; Hifaly sy ho ravoravo amin’izao isika. Mifona aminao aho, Jehovah ô, vonjeo è! Mifona aminao aho, Jehovah ô, ambino è! Hotahina anie izay avy amin’ny anaran’i Jehovah; Avy ao an-tranon’i Jehovah no itsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika; Rohizo kofehy ny fanati-piravoravoana na dia hatreo amin’ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho. Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony. »
Natao ny hira Ffpm 142 : 1, 3 « Tafatsangana tokoa » avy eo
VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA
Raha nanao ny vavaka fiderana sy fisaorana ny mpitarika dia nanambara fa Andriamanitra dia any amin’ny avo indrindra nefa tia sy mijery antsika ety ambany masoandro, miahy ny fiainanantsika isan’andro isan’andro. Izany no Andriamanitra deraina satria noho ny Aminy no maha-toy izao antsika. Nisaotra izy fa afaka nihombom-bavaka indray eto anivon’izao Fiangonana vavahadin’ny lanitra izao. Nisaotra izy fa fitiavan-dehibe tokoa izany . Mino ny fanatrehan’Andriamanitra izy , mino ny famenoiny amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ary noho ny amin’izany fanatrehany izany no ahatsapana ny fahadisoana ary ifonana eo anatrehany . Manantona anao amin’ny fo mibebaka tokoa izahay, hoy ny mpitarika, satria manoloana ny fahatsaranao, ny fitiavanao sy fahamasinanao dia tsy mendrika na dia ny hanatrika Anao akory aza izahay . Noho izany fitiavanao izany, nomenao noho ny amin’i Jesoa Kristy izao, hoy izy, dia indro izahay ankehitriny mandray ny famelan-keloka avy Aminao. Vory izahay hanatanteraka ny asa fanompoana Anao ka ho feno ny voninahitrao izay rehetra ho tanterahinay amin’ny anarantsonao Jesoa Tomponay . Amena
Nohiraina ny hira Ffpm 133 : 2,3,5 » Efa mamangy ny olony «
“Ry Tompo Andrimanitray o! Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo Ianao.Maharim-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Indreto izahay ! Midera sy manome Voninahitra ny Anaranao, ary mankalaza Anao, noho ny tombon’andro izay natolotrao anay , fa na dia eo aza izao vanim-potoana sarotra sy manahirana izao, mbola ao anatin’ny fihoboana an-trano ny mpianakavin’ny finoana dia nomenao tombon’andro, velona tra-mpamonjena ka afaka miara-miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao. Tompo o! Isaoranay Anao izay rehetra nitondranao ny fihainanay. Isaoranay Anao, ny fitehirizanao anay tsy ho isan’izay lasa nodimandry ka mampalahelo ny fiarahamonina fa nomenao tombon’andro hiaraka hanome Voninahitra Anao . Na izany aza anefa Tompo o! Dia tsaroanay ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay, izay hitalahoanay Aminao fatratratra, ary anehoanay ny fihaikenay ny helokay eo anatrehanao, ka hifonanay eo amin’izay rehetra vitanay ka tsy mifanaraka amin’ny sitraponao. Tompo o! Aza mamela ny fahadisoanay aharitra eo anatrehanao ary aza manisa ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay fa zovy moa izahay no afaka hifandahatra Aminao?. Izany indrindra no ahatsiarovanay fa Andriamanitra tsy miova Ianao, omaly sy anio ary mandrakizay fa ny fo torotoro sy ny fanahy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinontsinona . Izany famindramponao izany Tompo o! No hanantenanay fa hamela heloka Ianao, eny!, mamela heloka isanandro Ianao, ilay Tompo Andriamanitra ivavahanay. Raiso ny vavakay mba handraisanay ny famindramponao, iainanay sy ivelomanay amin’izay tombonandro mbola omenao anay . Misaotra Tompo Amen!”
Niroso tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy eo ka Rtoa Raharijaona Bodoharisoa no nivaka mialoha ny vakiteny. Tao amin’izany vavaka izany dia nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitehirizany antsika ao anatin’ny famindrapony ka maha-toy izao antsika tsirairay avy. Mandalo zava-tsoratra ity firenena ity, eny izao tontolo izao mihitsy aza, hoy ny mpivavaka, kanefa tsapanay ny tana-maherinao ka izany indrindra no isaoranay Anao, hifalianay fa ny fanekenao dia tehirizinao anay Fiangonanao, ho an’izay mahatoky Anao. Faly izahay miara-mivavaka satria hafa loatra ny aty amin’ny Tempolinao Masina fa na mivavaka aza izahay isam-pianakaviana any an-tokantrano dia tsapanay fa ny eto an-tranonao dia miavaka. Izany no hifalianay manana izao fotoana izao. Na dia vitsy aza izahay dia tsapanay fa eto afovoanay Ianao ary ny Fanahinao Masina dia miasa aminay rehetra. Raha handre ny teninao izahay ankehitriny, hoy izy, raha handre ny toriteny izay mampangetaheta anay dia nangataka Anao miasà amin’ny alalan’ny Teninao fa izany dia fiainanay, manana ny hery sy ny fahefana rehetra, hanamarina anay, hananay ny fiainana mandrakizay . Amin’ny anaran’i Jesoa lohan’ny Fiangonana no nangatahina izany. Amena.
Novakiana avy eo ny Tenin’ny Soratra Masina ka ny Perikoka ity alahady ity dia ny Isaia 26:11-19, Jaona 21:20-25, II Korint. 4: 16-18.
Ny hira Ffpm 242 and. 1,5 « Misaotra Anao ‘zahay ry Ray » no nohiraina mialoha ny toriteny.
Nasain’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina nitsangana ary niara novakiana ny Jaona 21:24 « Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany; ary fantatsika fa marina ny fanambarany. ».
Izany Teny izany no nangalany ny hafatra sy ny fampaherezana.
Raha izaho sy ianao afaka manatrika ka hoe ity no andro voalohany hisokafan’ny fiangonana, ao anatin’izao teo-javatra misy manerana ny tany sy eto amin’ny firenentsika dia misaora manokana ny Tompo hoe izahay izany no mpianakavin’ny finoana natokanao hivavaka ao anatin’ny fiangonana raha vao nisokatra ny fiangonana. Voafetra ny isan’ny olona mivavaka. Famerana hitandrovana ny aintsika sy ny fahasalamantsika izany, efa fantatsika izany.
Noho ny fandaminana kosa ka raha vao afaka nisokatra ny trano fiangonana dia ireo manana andraikitra aloha no miara miombona tahaka ny fanehona ara-pomba ara-dalana eo anivon’ny fiangonana fa misokatra ny fiangonana. Notsongaina aloha satria isika dia tomponandraikitra voalohany anaty Vaomiera, Sampana, Sampan’Asa, Asa…
Ity andin-tSoratra Masina ity dia teny farany nataon’i Jaona ho famaranana ny Filazantsarany izay filazana ny momba ny vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo.
Misy karazany telo ny vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo :
– Nahita fa tsy nino an’i jesoa ho kristy na mesia ary nitaona ny olona tsy hino.
– Nahalala fa nijanona ho mpihainohaino fotsiny ihany
– Tonga mpianatra vavolombelona mihitsy (io no ambaran’ny and. 24)
Io faha 3 no hafatra ho raisina satria izay no tena vavolom-belon’ny fitsanganan’ny Tompo
Hafatra telo no raisina amin’izany
1-	Manambara mazava ny amin’i Jesoa Kristy fa Izy no zanak’Andriamanitra (and. 24a)
Jesoa dia mahavita asa mahagaga nefa mbola tsy tena nitoetra tsara tamin’ny finoana ny mpianatra. Fa rehefa nitsangana Jesoa dia Petera, izay nandaha in-telo, dia nanaiky fa iny no Kristy. Ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty dia nitondra hery vaovao, fijery vaovao ka tena nampijoro ho vavolombelona marina.
Paoly Apostoly dia nahita sy nahalala an’i Jesoa Kristy ka izany no nanambarany ny tenany fa Apostoly izy. Nijoro mihitsy izy fa manana an’i Krsity. Hita ao amin’ny 2 Korintiana 4:16-18 zany.
Manana izany fahasahiana sy fahaizana ary zoto-po izany ve ianao ? Izany no tian’i Paoly ho tahafintsika.
Sambatra izay tsy nahita nefa nino hoy Jesoa. Izaho sy ianao izany. Avy niaina ny Herinandro Masina isika. Getsemane dia mifamatotra amin’ny fiainan’i Kristy : famihazana oliva ho menaka izany hoe Getsemane. Ny fiainan’i Jesoa tao Getsemane dia nofihazana toa ny olive ho lasa fahasoavana ho an’izay mino. Tena niaritra ny fangirifiriana mafy teo amin’ny hazofijaliana i Jesoa.
2-	Mampianatra ny momba an’i Jesoa Kristy mihitsy, mba handraisana Azy ho Tompo sy Andriamanitra (and. 24b)
Ilay nanoratra dia mampita ny fahalalana. I Jaona tsy nanoratra raha tsy tany amin’ny farany, mba hametrahany fampianarana mitombona fa Jesoa Kristy no Tompo, Jesoa Kristy no Andriamanitra.
Taorinan’izay izy vao nanoratra ny Filazantsarany. Miavaka satria ao no mampibaribary ny maha Andriamanitra an’i Jesoa. “Izaho sy ny Ray dia iray ihany” (Jaona 10:30) Teny nalaoky ny vavan’i Jesoa Kristy izany. Ao ihany koa no ahitana an’i Tomasy izay nanao fanekena hoe “Tompoko sy Andriamanitro” (Jaona 20:28). Maneho miarihary ny maha Tompo sy Andriamanitra an’i Jesoa, izany no fijoroana vavolombelona.
Eto Amparibe Famonjena dia mampianatra antsika ny tenin’Andriamanitra mba ho mpianatry ny Tompo tokoa isika.
3 - Eken’ny mino fa marina ny fanambarana sady mitombona ny fampianarana (and. 24d)
Marina ny fanambaran’i Jaona ny momba an’i Jesoa. Be mantsy ny fanambarana atao amin’ny onjam-peo isankarazany milaza hoe aty sy aty Kristy. Ny an’i Jaona dia marina ny fanambarany ary mifanaraka amin’ny Soratra Masina.
Mifanaraka amin’ny Soratra Masina ve ny fanazavana omen’ireny manao fanambarana samihafa ireny ? Ny antony nanoratan’i Jaona ity filazantsara ity dia satria misy mpaminany sandoka.
Izany rehetra izany no hanafarana anao anio fa maro ireo miseho ho manampahaizana sy manampahalalana milaza fa nisehon’i Jesoa.
Efa ho avy Jesoa. Miaina ao antin’ny vanimpotoanan’ny farany isika ; satana dia tena mamitaka, ary olom-boafidy mihitsy no tiany finganina sy fitahany, hifandroitany mba ho azy. Anaty vanimpotoana toa izao dia hilazana fa hipoitra avokoa izay fampianarana samihafa hafahafa ka hafarana ny amin’izany isika.
Raha te ho vavolombelona marina dia miezaha ho tahakan’i Jaona : Mahay manambara marina fa Jesoa no Tompo sy Andriamanitra, mitarika ny hafa ho mpianatra miteny sy milaza ny momba an’i Jesoa ary eken’ny rehetra fa marina izany fanambarana sy fampianarana izany sady mitombona noho ny asan’ny Fanahy Masina izay mitarika.
Aza matahotra ianareo, hoy ny Tompo, fa amin’ny fotoana hiatrehanareo ady sarotra dia ny Fanahin’ny Mpananatra ho ao anatinareo ka hiasa hitenenanareo izay tokony hambaranareo eo anatrehan’izany rehetra izany.
Ho an’Adriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
VAVAKA SETRIN'NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Ny Mpitandrina Razafinarivo Andriantsilavo Nofy no nanatanteraka ny vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra. Hoy izy tamin’izany hoe: nasongadina fa misy vavolombelona karazany 3 nahita ny fitsangananao : tao ireo tsy nino ary nitaona ny hafa tsy hino, tao ny mahalala fa mihainohaino fotsiny ihanyary tao ny nampita ka tonga mpianatra vavolombelona nanoratra mahakasika Anao Jesoa Kristy. Nomenao anay anio ny toetra tokony hanananay mba hanaamo mpianatra valombelon’ny Tompo tokoa izahay hanambara mazava ny momba anao Jesoa Kristy mba inoan’n y hafa fa Ianao tokoa no Zanak’Andriamanitra. Nambara koa fa marina ny momba Anao ary tokony ampitaina fa Ianao no Tompo sy Mpamonjy anay. Mamgataka izahay mba hanananay fahazotoana hanambara ny momba Anao sy hampianatra sy hampiely izany. Mangataka ho tohizanay izany, hampianatra ny maha mpamonjy anao, rehefa hihaona amin’ny havana dia aoka mba hizara izahay momba an’i Jesoa Kristy. Aoka ho toetranay sy ho fiainanay izany.
Niaraha-nanonona teo am-pitsanganana avy eo ny fanekem-pinoana Apostolika.
Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy no nanambara ny tsara ho fantatra vitsivitsy ho an’ny tompon’andraikitra manatrika ny fotoana.
– Ny fanompoam-pivavahana tamin’ny alalan’ny Facebook sy ny tranonkalan’ny Fiangonana dia nanomboka ny alahady 22 Marsa ary hatramin’ity anio ity ary nankasitrahana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ary ny teknisiana nampaina ny Fiangonana izany fanompoam-pivavahana izany. Ho ezahina ny ampita izany araka izay mety mandra-piverin’ny fotoana amin’ny ara-dalàna.
Ny Fiangonana dia nandray anjara fanampiana hatrany tamin ireo izay nila izany dia mpianatra Soratra Masina, nomena vatsy iray volana, ny mpianatra mpitandrina eo amin’ny Seminera Fjkm 3 izay
tsy afaka namonjy ny toerana niaviany dia nomena fanampiana, toy izay ny Toby Antambohimena ho fikarakarana ireo marary tsaboina eny an-toerana.
Ho antsika rafitra dia afaka manao fivoriana na fanompoam-pivavahana fa manaraka ny fepetra hatrany ary mampahafantatra ny Mpitandrina
– Momba ny fanompoam-pivavahana amin’ny herinandro dia nasaina mba tsy hanatrika intsony ny tompon’andraikitra efa nanatrika ankehitriny fa hanasa kosa ireo hafa. Ny fotoana amin’ny heriny dia ny Sabotsy amin’ny 7 sy 9 ora ary ny Alahady amin4ny 7ora, 9ora ary 11 ora.
– Aorian’ny fanompoam-pivavahana dia nasaina mba hody avy hatrany ny mpiara-mivavaka fa tsy hijanona eo an-tokontanim-piangonana.
– Nambara avy eo ny filazan-manjo voaray.
Nanao fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona avy eo ary natomboka tamin’ny fifampiarahabana izany satria fotoana ela no tsy nifankahitana ka toy ny fotoan-dehibe iray ity ka tokony hifampiarahabana. Ny teny fifampiarahabana dia ny hoe » Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy » ka ny tanana ankavia avonkina atao eo amin’ny tratra ary ny tanana ankavana mikopakopaka. Nifampitodika ny rehetra nanao izany.
– Nisaotra an’Andriamanitra izy avy eo noho ny valim bavaka satria efa afaka manatanteraka fanompoam-pivavahana ary am-piangonana.
– Nisaotra tamin’ny fandraisana anjara amin’ny Facebook saria misy ny fiombonana sy firaisan-kina na tsy mifanatri-tava aza.
– Aoka hifampitaiza anaiky tsara amin’ny namantsika hanaiky hatrany ny fandaminana amin’ny fanompoam-pivavahana.
– Tsarovy hatrany ny mitondra am-bavaka ny fiangonana Fjkm sy ny firenena
– Nanamafy izy momba ny fandaminana amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny Sabotsy sy Alahady ka misy hatrany ny fanatitra tanterahina. Aorian’ny fotoana amin’ny 11 ora dia hisy ny fianarana katekomena.
Natao tao anatin’ny feon-kira izany sy ny hira faha-141 « Efa resy ziao na dia ny fasana aza »
Ny hira fanolorana ny rakitra dia ny hira Ffpm 432 and. 2« Mandrapiavin’ny Tompo«
Notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona izany. Nisaotra izy fa nisokatra ny Fiangonana ka tonga eto amin’izao toerana voaomana hanatanterahana fanompoam-pivavahana izao. Nivavaka ho an’ny Fiangonana , ny mpitondra fivavahana, ny mpitory Filazantsara, ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ity fitandremana ity, misy izay, noho ny fandaminana dia misy no tafajanona any an-trano, ho an’ny STK Zokiny, misaotra noho ny fandaharana efa vita ka nalefa mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Nentiny am-bavaka ny fanompoam-pivavahana izay ho tanterahina amin’ny herinandro io sy ny fampianarana katekomena. Apetraka feno eo am -pelatananao, hoy izy, ny firenanay, manomboka any amin’ny mpitodra fanjakana, ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa amin’ny rehetra hatrany amin’ny fokontany, hanome azy fahendrena tsara , ho an’ireo mpitsabo miezaka mafy ho amin’ny fiarovana ny ain’ny olona , ho an’ny mpitandro filaminana hanana fahendrena hatrany mba hirindra sy milamina ny fiainan’ny vahoaka ka tsy hisy hanararaotra, ho an’ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahiny, indrindra ny fiahiana azy : fahasalamana , fisakafoanany, ka hiaro azy tsy ho tratran’izao aretina izao, ary izay tratra dia ho sitrana soa aman-tsara. Mivavaka ho an’ny sahirana, marary,, mana-manjo, ireo manana ataka manokana, mivavaka ho amin’ny fikasanay rehetr, mba hirindra sy hilamina tsara. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany
Ny hira Ffpm 173: 3 « Hosana fa sambatra izahay mpanomponao » no nohiraina mialohan’ny nanononana ny tondronzotra sy nanolorana ny tsodrano. Ny hira Ffpm 734 and. 1,2 « Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay » no namaranana ny tapany voalohany amin’ny fanompoam-pivavahana.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo .
Nandray an-tsoratra : Voahangy sy Seta Rajaofetra – Sary sy feo : Rova Harentsoa – Andry Rakotondramboa – Seta Rajaofetra .